Daniel na Olulu Ọdụm | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
A Tụbara Daniel n’Olulu Ọdụm
E nwere eze ọzọ chịrị Babịlọn. Aha ya bụ Darayọs, onye Midia. Darayọs chọpụtara na Daniel pụrụ iche. O mere ya onyeisi nke ndị ọkwá ha dị elu na Babịlọn. Ndị a ọkwá ha dị elu na-enwere Daniel anyaụfụ, ma na-achọ otú ha ga-esi gbuo ya. Ha ma na Daniel na-ekpe ekpere ugboro atọ n’ụbọchị. Ọ bụ ya mere ha ji gwa Darayọs, sị: ‘Eze, e kwesịrị ime iwu ga-ekwu na ọ bụ naanị gị ka a ga na-arịọ arịrịọ. A ga-atụba onye ọ bụla dara iwu a n’olulu ọdụm.’ Ihe a ha kwuru masịrị Darayọs, ya ekweta ka e mee iwu ahụ, bịanyekwa aka n’akwụkwọ iwu ahụ.
Ozugbo Daniel nụrụ iwu a e nyere, ọ lara n’ụlọ ya. O mepere windo ụlọ ya, gbuo ikpere n’ala, rịọwa Jehova arịrịọ. Ndị ahụ na-emere ya anyaụfụ kwooro bịa n’ụlọ ya, hụ ya ebe ọ na-ekpe ekpere. Ha gbaara gakwuru Darayọs, gwa ya, sị: ‘Daniel emeghị ihe ahụ i nyere n’iwu. Ọ na-arịọ Chineke ya arịrịọ ugboro atọ n’ụbọchị.’ Darayọs hụrụ Daniel n’anya, ọ chọghịkwa ka e gbuo ya. Si n’ụtụtụ ruo n’abalị, ọ nọ na-eche ihe ọ ga-eme ka a ghara igbu Daniel. Ma, Darayọs enwedịghị ike ịgbanwe iwu ọ bịanyerela aka na ya. N’ihi ya, ọ gwara ha ka ha tụba Daniel n’olulu ọdụm.
Darayọs ehighị ụra n’abalị ahụ ebe ọ na-eche banyere Daniel. N’ụtụtụ echi ya, ọ gbaara ọsọ gaa n’ọnụ olulu ahụ ma kpọọ Daniel òkù, sị: ‘Chineke gị ọ̀ napụtara gị?’
Darayọs nụrụ olu n’olulu ahụ. Ọ bụ olu Daniel. Daniel gwara ya, sị: ‘Mmụọ ozi Jehova mechiri ọnụ ọdụm ndị a. Ha emeghị m ihe ọ bụla.’ Obi tọrọ Darayọs ezigbo ụtọ. O nyere iwu ka a kpọpụta Daniel n’olulu ọdụm ahụ. Mgbe Daniel pụtara, o nweghị ihe ọ bụla mere ya. Eze nyeziri iwu, sị: ‘Tụbanụ ndị ahụ boro Daniel ebubo n’olulu ọdụm ahụ.’ Mgbe a tụbara ha n’olulu ahụ, ọdụm ndị ahụ dọriri ha.
Darayọs nyere ndị niile ọ na-achị iwu, sị: ‘Ka mmadụ niile na-atụ Chineke Daniel egwu. Ọ napụtara Daniel n’aka ọdụm.’
Ị̀ na-ekpe ekpere kwa ụbọchị ka Daniel?
“Jehova maara otú o si anapụta ndị na-asọpụrụ Chineke n’ọnwụnwa.”—2 Pita 2:9
Ajụjụ: Gịnị ka Daniel na-eme ugboro atọ kwa ụbọchị? Olee otú Jehova si napụta Daniel?
Daniel Kpere Ekpere
Kụziere ụmụaka gị uru ọ bara ịna-ekpegara Chineke ekpere kwa ụbọchị.
Kaadị Akụkọ Daniel
Gịnị mere e ji tụba Daniel n’olulu ọdụm? Bipụta kaadị a ka ị matakwuo gbasara Daniel.
Ndị Mmụọ Ozi Hà Nwere Ike Inyere Anyị Aka?
Ànyị kwesịrị ikpegara ndị mmụọ ozi ekpere ka ha nyere anyị aka?